Ngaba Ubundlobongela Bufanele? Umbuzo obalulekileyo wokuziphatha
Ubundlobongela ngumbono oyintloko wokuchaza ubudlelwane boluntu phakathi kwabantu, umxholo ogcwele umgangatho wokuziphatha kunye nezopolitiko . Kwezinye, mhlawumbi uninzi, iimeko zibonakala ukuba ubundlobongela bububi; kodwa, ezinye iimeko zibonakala zingabonakaliyo kumntu womntu: ingangobundlobongela buya kugwetyelwa?
Ubungqina obuninzi bokunyanzelisa ubundlobongela xa kuqhutyelwa ukubuyiswa kobundlobongela.
Ukuba umntu uhlasela ebusweni kwaye ubonakala enenjongo yokuqhubeka enjenjalo, kunokubonakala kubulungele ukuzama ukuphendula ubudlova.
Kubalulekile ukuphawula ukuba ulwalamano lunokuvela kwiifom ezahlukeneyo, kubandakanywa ubundlobongela ngengqondo kunye nodlova . Ngendlela elula kakhulu, ingxabano ekuthandweni kobundlobongela njengezibango zokuzikhusela ukuba ulwalamlo lwalunye uhlobo, impendulo enobundlobongela ngokulinganayo ingafanelekile. Ngaloo ndlela, ngokomzekelo, kwi-punch ungase uvumeleke ukuphendula ngesigxina; okwangoku, ukuxhaphaza (uhlobo lwezengqondo, ulwaphulo lwamazwi, kunye neziko), awufanelekanga ukuphendula ngesigxina (uhlobo lobudlova).
Kwinkcazelo engakumbi yokunyanzelisa ubundlobongela egameni lokuzikhusela, ubundlobongela nawuphi na uhlobo lunokuba luncedo ekuphenduleni ubudlobongela baluphi na uhlobo olunye, ngaphandle kokuba kukho ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kobundlobongela obunokuzikhusela .
Ngaloo ndlela, kusenokwenzeka ukuba kulungele ukuphendula ngokuxhalabisa ngokusebenzisa ubundlobongela obuphathekayo, kubone ukuba ubundlobongela abugqithisi oko kubonakala kunelungelo elifanelekileyo, okwaneleyo ukuqinisekisa ukuzikhusela.
Ingongoma engqongqo ngakumbi yobulungisa bendlobongela egameni lokuzikhusela kukuba inokuthi kuphela ukuba ulwaphulo-mthetho oluzayo luya kuqhutyelwa kuwe, linikeza isizathu esaneleyo sokusebenzisa ubundlobongela kumntu onokumkhohlisa.
Nangona le meko iqhubeka ngokuphindaphindiweyo kwimpilo yemihla ngemihla, ngokuqinisekileyo kunzima kakhulu ukuyiqonda: uyayazi njani, emva koko, ukuba umthetho uya kulandela?
Ubundlobongela kunye neMfazwe nje
Oko sikuxubusha nje kwizinga labantu ngabanye kungabanjelwa kunye nobudlelwane phakathi kwamazwe. I-Rhulumente inokuthi ilungele ukuphendula ngokukhawuleza ekuhlaselweni kwintlanzi - kuba yintlopheko engokwenyama, yengqondo okanye yomlomo. Ngokulinganayo, ngokweminye, kunokuthethelelwa ukuba uphendule ngobundlobongela obuphathekayo kwizonyango ezithile zomthetho okanye iziko. Ngokomzekelo, Masithi, i-State S1 ibeka i-embargo kwenye i-State S2 ukuze abemi basekugqibela bafumane ukunyuka kwamaxabiso, ukungabikho kwezinto eziphambili kunye nokudakumba kwabantu. Nangona omnye unokuthi i-S1 ayizange idlulise ubundlobongela ngokwenyama kwi-S2, kubonakala ngathi i-S2 ingaba nezizathu ezithile zokuphendula ngokusemthethweni kwi-S2.
Imiba ephathelele ukulungiswa kwemfazwe ixoxwa ngokude kwimbali yefilosofi yaseNtshona , nangaphezulu. Nangona abanye baye baxhasa ngokuphindaphindiweyo imbono ye-pacifist, omnye umbhali wagxininisa ukuba ngamanye amaxesha akunakunqandwa ukulwa nemfazwe.
Imilinganiselo kunye neNqobo yokuziphatha
Ingxoxo malunga nokunyanzeliswa kobundlobongela yimeko enkulu kwindawo yokubeka ecaleni kwento endiyibhalela ngayo iinjongo kunye neendlela ezifanelekileyo zokuziphatha.
I-idealist iya kugxininisa ukuba, kungakhathaliseki ukuba yintoni, ugonyamelo alusoze lulungiswa: abantu bafanele balwele ukuziphatha okufanelekileyo apho ubundlobongela bungabonakali, nokuba ngaba ukuziphatha kufikeleleka okanye akunjalo. Ngakolunye uhlangothi, ababhali abanjengoMacavavelli baphendula ukuba, ngelixa lombono, iinjongo zokuziphatha ziza kusebenza ngokufanelekileyo kakuhle, ngokwenza izinto ezinjalo azikwazi ukulandelwa; kuqwalasela kwakhona imeko yethu kwinqanaba, ekusebenzeni abantu banobudlova, ngoko ke ukuzama nokuziphatha okungenokudlova kuyisicwangciso esilungiselelwe ukusilela.
UCF GPA, SAT kunye ne-ACT Data
I-Ford F-Series Pickup Trucks, ngo-1980-1986
I-Enthalpy Utshintsho lweqhwa kwi-Vapor yamanzi
Indlela Yokukwazi Ukuba Unyanzelekile Ukuqesha Umqambi
Ukubaluleka kolwimi lwesiArabhu kwi-Islam
Imfazwe ye-1812: Ukuvinjelwa kweDetroit
Ukudibanisa iiVebhu zesiFrentshi rhoqo kwiNgqungquthela
Inkcazo ye-Aggregate Demand